जमातको सलाह – Islam Guide
डिसेम्बर 24, 2017 Comments
(तपाईंको सलाह) فهد بن سالم باهمام द्वारा
अल्लाहले पुरुषहरुलाई सामुहिक रुपमा पाँच बेलाका सलाहहरु पढ्ने आदेश दिनु भएको छ। सामुहिक रुपमा सलाह पढ्नेहरुका लागि बढी सवाब (पुण्य) को वाचा गर्नु भएको छ। रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले भन्नु भएको छ… “एक्लै नमाज पढ्नु भन्दा जमातका साथ पढेमा २७ गुणा बढी सवाब (पुण्य) प्राप्त हुन्छ।” (श्रोत- बुखारी : ६१९, मुस्लिम : ६५०)
जमातको न्यूनतम संख्या… इमाम (अगुवा) र मुक्तदी (इमामको अनुसरण गर्ने व्यक्ति) हो। जमात जति ठूलो हुन्छ, अल्लाहले त्यति नै मन पराउनु हुन्छ।
मुक्तदीले आफ्नो सलाहलाई इमामको सलाहसँग गाँस्नु पर्दछ। रूकू, सज्दामा उसको अनुसरण गर्नु पर्दछ। उसको केरात (कुरआनको पाठ) लाई ध्यानपूर्वक सुन्नु पर्दछ। कुनै पनि कार्य इमाम भन्दा अगाडि वा धेरै ढिलो र उसको विपरित गर्नु हुँदैन। पूर्ण रुपमा इमामको अनुसरण गर्नु पर्दछ।
रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले भन्नु भएको छ… “इमाम अनुसरण गर्नको लागि हो। जुन बेला ‘अल्लाहु-अक्बर’ भन्नु हुन्छ, तिमीहरु पनि ‘अल्लाहु-अक्बर’ भन र इमाम भन्दा पूर्व ‘अल्लाहु-अक्बर’ नभन। जब रूकू गर्नुहुन्छ, तिमीहरु पनि रुकू गर र इमाम भन्दा पूर्व रूकू नगर। जब ‘समिअल्लाहू लिमन हमिदह’ भन्नु हुन्छ, तिमीहरु उभेर ‘रब्बना वालकल-हम्द’ भन। जब सज्दा गर्नुहुन्छ, तिमीहरु सज्दामा जाऊ र इमाम भन्दा पूर्व सज्दामा नजाऊ …।” (श्रोत- बुखारी : ७०१, मुस्लिम : ४१४, अबु-दाऊद : ६०३)
कुरआनको हाफिज र त्यसपछि जो बढी जानकार हुन्छ, ऊ नै इमामतको हकदार हुनेछ। रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले भन्नु भएको छ… “कुरआनको हाफिजलाई आफ्नो इमाम बनाऊ। यदि यसमा सबै बराबर छन् भने सुन्नतको आधारमा प्राथमिकता देऊ।” (श्रोत- मुस्लिम : ६७३)
इमाम र मुक्तदी कहाँ उभिने छन्?
इमाम (सामूहिक सलाहमा) सामान्य पंक्ति भन्दा अगाडि र मुक्तदी इमामको पछाडि पंक्तिबद्ध एक अर्कासँग मिलेर उभिने छन्। पहिलो पंक्ति पूरा नहुन्जेलसम्म दोस्रो पंक्ति र दोस्रो पंक्ति पूरा नहुन्जेलसम्म तेस्रो पंक्ति लगाउनु हुँदैन। यदि मुक्तदी एक्लै छ भने इमामको दायाँ पट्टि उभिनेछ।
इमामसँग सलाह पढ्दा छुटेका रकातहरु कसरी पूरा गर्ने?
इमामसँग सलाह पढ्दा केही रकात छुटिसकेको छ भने अल्लाहु-अक्बर भनेर जमातमा प्रवेश गर्नुहोस्, जति पाउनु हुन्छ त्यति पढ्नुहोस् र इमामले सलाम फेरिसकेपछि बाँकी रकातलाई पूरा गर्नुहोस्।
इमामको साथमा पढेको सलाह उसको पहिलो रकात र छुटेको सलाह उसको अन्तिम रकात हुनेछ।
कुन अवस्थामा रकात पाइन्छ?
जसले इमामको साथमा रूकू पायो उसले पूरा रकात पायो। जसले रूकू पाएन उसले रकात पाएन तर जमातमा सामेल हुनुपर्छ र छुटेको रकातलाई इमामले सलाम फेरिसकेपछि पूरा गर्नु पर्दछ।
इमामको साथमा छुटेका सलाहलाई पूरा गर्ने केही उदाहरणहरु
जसले इमामको साथमा फज्रको दोस्रो रकात पायो, उसले इमामले सलाम फेरिसकेपछि एक रकात पूरा गर्छ अनि सलाम फेर्छ, ’cause फज्रको सलाहमा दुई रकात पढ्नु पर्दछ।
जसले इमामको साथमा मग्रिबको अन्तिम तशह्हुद पायो, उसले इमामले सलाम फेरिसकेपछि तीन रकात पढ्नु पर्दछ, ’cause तशह्हुदले रकातको गन्ती हुँदैन।
जसले इमामलाई जुहरको तेस्रो रकातको रूकूमा पायो, उसले इमामले सलाम फेरिसकेपछि दुई रकात मात्र पूरा गर्नु पर्दछ, ’cause उसले इमामको साथमा दुई रकात पाईसकेको छ र जुहरको सलाह चार रकात हुन्छ। इमामसँग पाएको रकात मुक्तदीको पहिलो रकात हुनेछ।
वर्ग: तपाईंको सलाह